မြန်မာအစိုးရ နိုဘယ်ဆု ရနိုင်တယ်လို့ ဖင်လန် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပြော
ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် မြန်မာအစိုးရ နိုဘယ်ဆု ရနိုင်တယ်လို့ ဖင်လန် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းပြော
"အမှန်အတိုင်း ပြောပြလို့ရမလားဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်........ရဲ နဲ့ပတ်သတ်ပြိးတော့ရော ပြိးတော့ တရာသူကြီးတွေ ရော ပါနေလို့... ပို့လို့ဖြစ်မလားဆိုတာကို အရင်သိချင်ပါတယ်...."
Mar 03, 2013 04:07 PM
genius နေရပ်- YANGON :
ဘုရား ၊ ဘုရား ...... တလွဲ တွေ မလုပ်လိုက်ပါနဲ. ၊
ဒီလောက် ကလိမ်ကကျစ် ကျပြီး ယုတ်မာတဲ.
အစိုး၇ကို ..... ။ ။
Mar 02, 2013 04:30 PM
ေျပဟိန္း နေရပ်- Copenhagen :
I am very happy that My way of thinking and My way of supporting our new government is not wrong.Because there arealots of people andalots of other country think and support like me. But onlyasmall group of people disagree with us is understandable and forgivable.
Mar 02, 2013 03:48 PM
မိုးသီး နေရပ်- mdy96 :
ကြိုဆိုပါတယ် ။ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရယူနိုင်ပါစေ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အောက်ခြေ
Mar 02, 2013 12:14 PM
tin aung နေရပ်- Kotka :
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မြန်မာအစိုးရဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ရရှိနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် Martti Ahtisaari က သောကြာနေ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။ mistake ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဖင်လန်သမ္မတဟောင်း တယောက်ဖြစ်တဲ့ Martti Ahtisaari
Mar 02, 2013 02:26 AM
nathan နေရပ်- tri-cities :
not to be thinks it true that others' uplifting asachild but it's needs to consider what kinds of beast am i or who am i ?
Mar 02, 2013 12:21 AM